စည်းကမ်းနဲ့ အဆင့်အတန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » စည်းကမ်းနဲ့ အဆင့်အတန်း
Posted by manawphyulay on Mar 3, 2013 in Community & Society, Society & Lifestyle | 10 comments
ကျုပ်သည်လည်း ကွမ်းစားသူ ကြုံရာမှာ ကွမ်းတံတွေးထွေးသူ
အမြဲးတမ်းနီးပါ စည်းကမ်းကို လူလစ်ရင်လစ်သလို မလစ်ရင် မလစ်သလို
ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပီးသည့် သကာလ နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပါ့မည်ဟု………….
ဘတ်စကားပေါ် ကွမ်းစားတာနဲ့ ဒဏ်ငွေ တစ်သောင်းလောက်တပ်ပလိုက်။
ခက်တာက စပယ်ယာနဲ့ ဒရိုင်ဘာကိုယ်တိုင်က ထိပ်ဆုံး။
အဲ့လိုများလုပ်လိုက်ရင် ကွမ်းသမားတွေ ဆန္ဒပြကြမလားမသိ. :ghee:
စည်းကမ်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်လို့ တခုခုကို အမြစ်ပြုတ်အောင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ စီမံသင့်တယ်ထင်တယ် ဒါမှ မိုမန်တန်ခေါ်တဲ့ အရှိန်အဟုန်ရလာပီး အခြားစည်းကမ်းမဲ့မှုတွေ တိုက်ဖျက်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဥပမာ – အမှိုက်ပစ်မှုကို နှိမ်နင်းနိုင်ရင် ကွမ်းတံတွေးထွေးတာ ထိန်းချုပ်ရလွယ်လိမ့်မယ်၊ အခြား လမ်းစည်းကမ်းဖောက်တာ ဘာညာကွိကွတွေလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ။ ရပ်နေသော အရာများသည် ရပ်နေမြဲနေလိုသော သဘာဝရှိပြီး သွားနေသော အရာများသည်လည်း သွားမြဲသွားလိုသော သဘောရှိ၏တဲ့ သိပ္ပံအခြေခံ အီနားရှားလေး ဖတ်ဖူးတယ် မဟုတ်လား…။ ဒီတော့ ရပ်နေတာကို သွားအောင် တွန်းပေးပါ။ အကုန်ရပ်နေတော့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး တခုကနေ စတွန်းပါ၊ အောင်မြင်ရင် ကျန်တာတွေ လှုပ်လာမယ်။။။။
ပြောရတာ သိပ်အရသာ ရှိတာပဲ… လက်တွေ့သာ ဘယ်ကစရမှန်း မသိတာ… :harr:
စိတ်ဓတ်မြင့်မားမှ(ဘာမဆို လေ့လာဆည်းပူးသည်းခံရိုးသားကြိုးစား ဂါရဝနဲ့ မုဒိတာရှိပါစေ) လူနေမှူမြင့်မားတိုးတက်မည်
Secondhand Smoke – American Cancer Society
http://www.cancer.org › … › What Causes Cancer? › Tobacco & Cancer
Non-smokers who breathe in secondhand smoke take in nicotine and other toxic chemicals just like smokers do. The more secondhand smoke you are exposed …
ဆေးလိပ်ရော.. ကွမ်းရောက.. ဘေးလူတွေထိခိုက်စေပုံရပါတယ်..။
အဲဒါကြောင့်.. ယူအက်စ်မှာ ပါဗလစ်(လူတွေကြား) ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် မပေးတော့ပါဘူး..။ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတောင် ဘေးလူရှိရှိမရှိရှိ..ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မရှိတော့ပါ..။
.. မြန်မာတွေရဲ့.. အတွေးအခေါ်ရေးရာ.. စိတ်ဓါတ်ရေးရာ.. ဗုဒ္ဓသာသနာကို.. ဒုက္ခပေးသွားတာ.. အဲဒါလို့.. ထင်တယ်..။ အတွေးအခေါ်တွေကို ရိုက်ချသွားတာ..
ကိုမိုးသီးဇွန်က.. နာခံမှုကိုစမ်းစစ်ခြင်း ရေးပြီး..လောကနီတိကို.. တည့်တည့်ကို ဝေဖန်ထားတယ်..
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. သူ့ရဲ့အဲဒီစာအုပ်ပါအချက်တွေ..တော်တော်များများကို လက်ခံတယ်..။
ဆေးလိပ်သောက် ကွမ်းစားတာဟာ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုပေမဲ့ သုံးစွဲသူမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေလို့ လိုက်လျောရမည့် အရာလို့ သတ်မှတ်လို့ မရတော့ဘူး။ သီအိုရီ အရပြောရင် ရောဂါရလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါ နိုင်ငံဒေါ်မှာ လုပ်အားဆုံးရှုံးတယ်၊ နောက်ဆက်တွဲ အခွန်လျော့နည်းတယ်။ တဖက်မှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစရိတ် မြင့်တက်တယ်၊ မြန်မာပြည် ဆေးရုံတွေမှာ ကိုယ့်စားရိတ် ကိုယ်ပေးဆိုပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ဆေးရုံကုတင်တွေ ပြည့်ကျပ်တယ်၊ အခြားလူနာတွေ နစ်နာတယ်။ စည်ပင်သာယာ သန့်ရှင်းရေးမှာလည်း အပိုအလုပ်တွေ လုပ်ရလို့ ဘတ်ဂျက်နစ်နာတယ်။ passive smoke လို ဘေးလူအပေါ် ရောဂါကူးစက်မှု ပြသနာလည်း ရှိတယ်။ လူဂျီးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကြပ်မှတ်ထိန်းကွပ်ရမယ်။ ခလေးတွေကိုတော့ ငယ်စဉ်ထဲက ကျောင်းတွေမှာ မီဒီယာတွေမှာ အဆက်မပြတ် ပညာပေးရမယ်။ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးစံနဲ့ အများဂျီး ဆိုင်သေးလို့ စွတ်လုပ်လို့တော့ ရဘူး။ ဥပမာ အနောက်တိုင်းမှာ အရက်သောက်တာ အပြစ်ပြောတဲ့သူ သိပ်မှမရှိတာ။ အသက် မပြည့်သူတွေကို မရောင်းဖို့၊ အဆင့်မှီ အရက်တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့၊ မူးရင် ကားမမောင်းဖို့လောက်သာ ကြပ်မတ်တယ်။ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးလို နှိပ်ကွပ်တာ မရှိဘူး… မရှိဆို အရက်သောက်တာ သူတို့ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်နေတာကိုး…. ဒီတော့ စည်းဘောင်ကြပ်မတ်ပြီး ထိန်းကျောင်းတယ်။ နယ်မြို့တွေမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ဆို အရက်မရောင်းရဘူး၊ သောက်ချင်ရင် ခိုးဝယ်ရတယ်။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ဝယ်တာတောင် စက္ကူအိပ်ထဲ ဖွက်သယ်ရတယ်။ မြန်မာပြည် အနေနဲ့ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းလို ဟာမျိုးကို မီဒီယာ တီဗွီ ရုပ်ရှင်တွေကတဆင့် လူတွေ မကောင်းမြင်လာအောင် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်သွားရင် တိုက်ဖျက်ရေး အောင်မြင်နိုင်တယ်။ ဒီဖက်ခေတ်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လိုက် စီးကရက် ခဲတာအစား အရက်သောက် ဘီယာဆိုင်ထိုင်ပြတာနဲ့ အစားထိုးလာပြီ။ တိုးရစ်ဇင် ယဉ်ကျေးမှု အရှိန်ရလာတော့ အရက်ဘီယာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်မယ်။ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းကို ကျန်းမာရေးအပြင် တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေး စတဲ့ရှုဒေါင့်ပေါင်းစုံကနေ ဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြ။ ဥပမာ – ကောင်မလေးက စမတ်ကျတဲ့သူသာ ကြိုက်တာမျိုး၊ ငနုံငအသာ ဆေးလိပ်သောက် ကွမ်းစားတာမျိုး ရိုက်ပြ။
” စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်ချမိရင် အဲဒီလူကို
အထင်သေးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဝိုင်းပြီးကြည့်ကြ ပါတယ် ”
လိုရင်းက ဒါပါပဲ ။
ပါတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးက စည်းကမ်းမဲ့ တာကို လက်မခံ အပြစ်မြင်လာရင် ၊
စည်းကမ်းမဲ့ တာတွေ အလိုလို ပျောက်သွားမှာပါ ။
အဲလိုဖြစ်အောင် မူလတန်းကျောင်းကနေ စပြီး ပုံသွင်းရမှာပါ ။
မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဘဖောရေ…..။ စည်းကမ်းကို ဥပဒေ တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီး တိတိကျကျ ကွညှပ်မှ ကိုဖြစ်တော့မှာ နို့မို့ ဆို အီလည်လည်နဲ့ ပိုးသာကုန်ပြီးမောင်ပုံ စောင်းမတတ်ဖြစ်တော့မှာ
အထင်သေးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဝိုင်းပြီးကြည့်ကြ ပါတယ် ” အဲဒိလောက်တော့ သခင်မျိုးဟေ့ ဒိုဗမာတွေက ဂရုကိုမစိုက်တာ ဒါပြည်တွင်းက အမြင်နော်